Ugwadule oluseningizimu-mpumalanga yeCalifornia luyaphila ngemuva kweminyaka emihlanu yesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IZITHOMBE: Ugwadule oluseningizimu-mpumalanga yeCalifornia luyaphila ngemuva kweminyaka emihlanu yesomiso
Isithombe - I-Anza Borrego Ugwadule State
Ngisho nogwadule olungenakuhlala kahle lunganikeza isimanga esihle kakhulu. Futhi ukuthi, ngemuva kwesiphepho, ukuthula kubuya njalo noma, kunalokho, impilo. Isibonelo salokhu ugwadule lwaseningizimu-mpumalanga yeCalifornia. Lapho, ngemuva kweminyaka emihlanu yesomiso, izimvula zalobu busika obudlule zenze ukuthi izimbali zithathe indawo ezungezile.
Kepha futhi ukuthi bakwenze ngendlela ebabazekayo. Ngokuvamile, kuhlale kukhona isitshalo esikhuthazwa ukuba siqhakaze ngisho noma izimo zingavumi kakhulu; nokho, kulokhu izinkulungwane nezinkulungwane zezimbali zikhanyisa ugwadule lwesifundazwe eseningizimu-mpumalanga.
Isithombe - UKyle magnuson
Imbewu ezingwadule ezishisayo idinga ukufudumala, inhlabathi enesihlabathi kakhulu, namanzi amancane ukuze ihlume. Kodwa-ke, kulezi zindawo awusoze wazi ukuthi izokuna nini ngokwanele ukuze izitshalo ziphinde zivuke. Kepha izidalwa zezitshalo zenze isilinganiso esimangazayo sokuguquguquka: uma izimbali sezithole impova, umbungu ungalala isikhathi eside, ngoba igobolondo eliwuvikelayo ngokuvamile liba nzima kakhulu.
Vele, ngokushesha nje lapho amaconsi okuqala ewa, imbewu ayinqikazi ukuqhuma ukuze isebenzise kakhulu uketshezi oluyigugu oluzobasiza baqedele umjikelezo wabo wempilo, nokuyinto eyenzekile eCalifornia.
Ukwehliswa kogwadule i-Anza Borrego, eningizimu-mpumalanga yeCalifornia, kusuka ngo-1985 kuya ku-2017. Isithombe - NOAA
Imvula ibiphansi ezikhathini zakamuva, kepha ebusika ngo-2016/2017 yawa ngaphezu kokuphindwe kabili yalokhu obekuwa. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esingenhla, ogwadule lwase-Anza Borrego imvula ebusika ejwayelekile ayinawo ama-36ml, kodwa eyokugcina yephule amarekhodi ezikhathi zakamuva kanjalo yaphela, okungenani okwesikhashana, isomiso.
Izithombe zinhle ngempela, awucabangi?
Isithombe - Anza Borrego Wildflower Guide Facebook
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » IZITHOMBE: Ugwadule oluseningizimu-mpumalanga yeCalifornia luyaphila ngemuva kweminyaka emihlanu yesomiso
Ingabe uLwandle Olufile lungasindiswa ekunyamalaleni?